Yintoni i-Real-Time Bidding? | Martech Zone
Kuzo zombini ezi zinto zihlawulwayo, ukukhangela kunye nentengiso ephathekayo, zininzi izinto ezinokuthengwa. Ukuze ufumane iziphumo eziqinileyo, kuya kufuneka uvavanye ukuthengwa kwamakhulu okanye amawaka wokudityaniswa kwamagama aphambili kukhangelo oluhlawulelweyo. Ukuba wenza intengiso okanye intengiso eselfowuni, uluhlu lweempahla lunokusasazeka phakathi kwamakhulu okanye amawaka eziza okanye iiapps.
Yintoni ukubhida ngexesha lokwenyani?
Ukubeka iliso ngesandla kunye nokubhida kwiindawo onqwenela ukubhengeza kuzo akunakwenzeka. Ukulungisa le nto, ukukhangela okuhlawulelweyo kunye notshintshiselwano ngentengiso zisebenzisa ibhidi yexesha langempela (i-RTB). Ngokubhida kwexesha lokwenyani, umthengisi ubeka imiqobo yentengiso kunye nohlahlo-lwabiwo mali, kwaye inkqubo ixoxisana ngokubekwa ngakunye kwifandesi yexesha lokwenyani eyenzeka phantse ngephanyazo.
I-RTB inokusebenza ngokufanelekileyo kwaye iyingozi. Ukuba awungomsebenzisi onamava, awunakuseta umda kuthengiso lwakho lwentengiso kwaye uphulukane nohlahlo-lwabiwo mali lwakho ngentengiso kwindibaniselwano yamagama aphambili angasebenziyo okanye kwiindawo ezingabalulekanga. Kwenziwe kakuhle, nangona kunjalo, ukusebenza kwe-RTB kunye nokusebenza kwayo kungaphezulu kakhulu kongenelelo lwencwadi.
Lihambe njani ixesha elide lokubhida ixesha?
Amaqonga amaNgcaciso eDatha anokukhupha kwaye aguqule izigidi zeerekhodi kunye nexesha lokwenyani- kubandakanya idatha yokuguqula- ziyanceda ukuqhubela phambili i-RTB ngaphaya kokunciphisa nje iindleko zokubhida kunye nokwandisa amaxabiso okucofa. Ngokuhlalutya idatha yokuguqula ngexesha lokwenyani, umntu otyeleleyo, kunye nokuziphatha kwezixhobo ezinqamlezayo, amaqonga e-RTB ayakwazi ukuqikelela ngokuchanekileyo ukubekwa kwentengiso elungileyo, ngexesha elifanelekileyo, phambi komntu olungileyo, kwisixhobo esifanelekileyo.
Sithethe malunga nexesha lokwenyani lokubhida kwi Inkqubo yentengiso kwipodcast yethu yakutshanje noPete Kluge. Qiniseka ukuba umamela ipodcast- yayiyincoko emnandi.
Mamela kudliwanondlebe lwethu noPete Kluge weAdobe
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nokuBhida kweXesha-lokwenene
Nalu uphononongo oluneenkcukacha ngexabiso lokwenyani lweXesha kwi-infographic.
Ividiyo evela Imithombo yeendaba.
tags: iintengisobonisa intengisoHlawula ngokucofa kanyePPCukubiza ixesha lokwenyanirtb
Iindlela ezili-13 zokujolisa kuMboniso wakho weNtengiso